Akhriso Magacyada Jawaasiis Lagu Dilay Goob Fagaara Ah. – Calamada.com
Akhriso Magacyada Jawaasiis Lagu Dilay Goob Fagaara Ah.
calamada January 26, 2017 2 min read
Maxkamadda islaamiga wilaayada Bay iyo Bakool ayaa xukun dil ah ku fulisay Kooxo Jawaasiis Soomaali ah oo wada shaqeyn lalahaa dowladda Mareykanka.
Fagaaraha weyn ee deegaanka Yaaq-Baraawe ee gobolka Bay ayaa shalay gelinkii dmabe lagu dilay illaa iyo3 ruux oo lagu helay in ay u basaasayeen sirdoonnada Mareykanka iyo dowladda federaalka ayna maleegayeen shirqoollo ka dhan ah shacabka Muslimiinta Soomaaliyeed.
Jawaasiista xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa ukala shaqeynayay Mareykanka,Kenya iyo dowladda Federaalka waxayna qaarkood qaabilsanaayeen muhiimad ah sahminta waddooyinka ay cadawgu isticmaalaan ,qaaddiga maxkamadda xukunka ridday ayaa fagaaraha Yaaq Baraawe ka sheegay in Ragga jawaasiista ah ee galabta ladilay uu kamid ahaayeen Nin oo toos ula shaqeynayay CIA-da Mareykanka.
Â Sedaxda Eedaysane ee lagu dilay Yaaq Baraawe iyo dambiyada lagu helay.
1-c/llaahi daamey Maxamed Nuur oo 36 sana jir wuxuu ahaa jaajuus u shaqeynayay CIA-da Mareykanka wuxuu sheegay in ay shaqa geliyeen saraakiil ku sugan garoonka diyaaradaha Balli-doogle ee duleedka degmada wallaweyn Sh/Hoose.
Qalabka lagu hago diyaaradaha Drone-ka loo yaqaan ee aan duuliyaha laheyn ayuu C/llaahi kasoo qaaday saraakiisha Mareykanka wuxuu doonayay in uu ku dhajiyo gaari uu lahaa sarkaal katirsan xarakada Al Shabaab balse qorshahaasi waa la fashiliay gacanta ayaana lagu dhigay isaga iyo qalabkii Mareykanku usoo dhiibay, bil walba wuxuu qaadanayay lacag dhan $200 mudada uu shaqeynayay waxay aheyd 2 bilood.
2-Maxâ€™med iimaan xasan oo 42 sana jir ah ayaa kamid ahaa raggii shalay ladilay ee lagu helay falka jaajuusnimada ah wuxuuna si gaar ah ula shaqeynayay PS-ta ama Ashahaadda ladirirka maamulka â€˜Jubbalandâ€™ isku magacaabay wuxuu kala shaqeeyay sahanka jidadka mara duleedka magaalada Kismaayo iyo marka ciidanka Kenya ay qaadayaan duullaano ka dhan ah muslimiinta oo uu u ahaa Daliil ama wadda aqoon, bil walba wuxuu mushaar ahaan u qaadanayay 150$.
3-Maxamed shariif Cali 21 sana jir ah wuxuu ahaa Jaasuus u shaqeeya sirdoonada caalamiga ah ee ku sugan magaalada Kismaayo waxaa shaqa geliyay sarkaal katirsan maamulka Axmed Madoobe, shaqada uu cadawga u qaban jiray ayaa aheyd uruurinta macluumaadka ku aaddan soo gudbinta dhaq dhaqaaqyada ciidamada Xarakada Al Shabaab marka ay weerar ku qaadayaan Kismaayo ama saldhigyada ciidamada Kenya.
Sidoo kale wuxuu u ahaa wadda yaqaan gacan ka geysan jiray in ciidanka huwanta ah uu mariyo waddooyinka aysan ku sugnayn ciidamada Al Shabaab wuxuuna sheegay in isku gayn lacag mushaar ah u qaatay $500.
Mas’uuliyiin Katirsan xarakada Al Shabaab ayaa ku goodiyay in ay gacan adag kula dhaqmi doonaa dhammaan kooxaha cumalada u ah dowladaha shisheeye waxayna ugu baaqeen in ay mujaahidiinta isku dhiibaan ka hor inta aan gacanta lagusoo dhigin.
Previous: Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka OO Xasuuq Ka Geystay Bakool.
Next: Weerar Gaari Looga Qabsaday Dowlada Federaalka Oo Ka Dhacay Sh/hoose.